အစေ့မဲ့ဖရဲသီးမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သူများ - China Seedless Watermelon Seed Factory & Suppliers
၀၀၈၆ ၃၁၁ ၆၈၀၇၂၀၈၆
Stripe Oblong ဖရဲသီးစေ့
Stripe Seedless ဖရဲသီးစေ့
အနက်ရောင် အစေ့မဲ့ ဖရဲသီးစေ့
အစေ့မဲ့ ဖရဲသီး အဝါရောင်
Rock Melon Seed ၊
Musk Melon စေ့
Yellow Squash မျိုးစေ့
နွေရာသီ Squash မျိုးစေ့
အရွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျိုးစေ့
Shallot Seed ၊
hybrid 361 အမျိုးအစား နေကြာစေ့ စိုက်ပျိုးခြင်း။
Hybrid f1 တရုတ်နေကြာစေ့ SX No.5 စိုက်ပျိုးခြင်း။
Emperor No.1 တရုတ် f1 မျိုးစပ်ဖရဲသီးမျိုးစေ့
Big Pearl Chinese oblong ဖရဲသီးစေ့
အဝါရောင် Xing Ha မျိုးစပ် အနီရောင် အသားမွှေး ဖရဲသီး အစေ့
လက်ကား Europe Round Stripe Sweet Hybrid F1 Melon...
တရုတ်အထွက်နှုန်းမြင့်မားသော ရွှေဝါရောင်လိမ္မော် ချယ်ရီမျိုးစပ်...
SXTS No.1403 ပန်းရောင်စပ် ခရမ်းချဉ်သီးအစေ့များ
Hybrid Jade No.1 အစောပိုင်း အရွယ်ရောက်ပြီး ချောမွေ့သော အစိမ်းရောင် အရေခွံ...
Naivy Chinese လိမ္မော်ရောင် အော်ဂဲနစ် ရွှေဖရုံစေ့
တရုတ်စက်ရုံ Blocky ခေါင်းလောင်းမွှေးစိမ်းစပ်စပ် ငရုတ်ကောင်း...
တရုတ်ပူပူ ရိတ်သိမ်းရောင်းချမှု အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျိုးစပ်ပြန်လည်...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ဖရဲသီးအစေ့အရောင်- အစိမ်း၊ အဝါရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: ရွှေသစ်ခွမျိုးစပ်: YES အသီးပုံသဏ္ဍာန်: အဝိုင်းအသီး အသားရေ: အစိမ်းရင့်ရောင် အစင်းကြောင်းများ အသားအရောင်- အဝါရောင် အသီးအနှံများ အလေးချိန်- 5-7kg အရသာ- အရသာကောင်းမွန်သော သကြားပါဝင်မှု- 12% ထုပ်ပိုးမှု- မျိုးစေ့ 1000/အိတ် သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်အရ ထောက်ခံချက်- မူရင်းလက်မှတ်၊CIQ;ISTA;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်...
အစေ့မပါသော ဖရဲသီးအစေ့များသည် အဝါရောင်အရေခွံနှင့် စပ်သည်။
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ဖရဲသီးအစေ့ အရောင်- အနီရောင်၊ အဝါရောင် မူရင်းနေရာ- တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ် နံပါတ်- ရွှေနေရောင် မျိုးစပ်: YES အသီးအသားရေ- ရွှေဝါရောင် ဝက်ခေါက် ကျဉ်းမြောင်းသော အစင်းကြောင်းများဖြင့် ...
Flesh Hybrid F1 ဖရဲသီးစေ့ အဝါရောင် အနီရောင် ခေါက်ဆွဲ YB No.1
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ဖရဲသီးအစေ့ အရောင်- အနီရောင်၊ အဝါရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei, China အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Shuangxing မော်ဒယ်နံပါတ်: YB No.1 မျိုးစပ်: YES အသီးအသားရေ: အဝါရောင်ဝက်ခေါက် အဝါရောင် အစင်းကြောင်းများ...
အထွက်နှုန်း မြင့်မားသော အဝါရောင် အသားမဲ စေ့မပါသော ဖရဲသီးစေ့များ စျေးနှုန်းကောင်းမွန်ပြီး အထုပ်ကောင်း
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ဖရဲသီးအစေ့အရောင်: အနက်ရောင်၊ အဝါရောင် မူရင်းနေရာ- တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: ရွှေနှင်းဆီ မျိုးစပ်: YES အသီးပုံသဏ္ဍာန်: အဝိုင်းအသီး အသားရေ: အနက်ရောင် အနက်ရောင် သစ်သီး အလေးချိန်: 3kg ခန့် အသားအရောင်: သံပုရာဝါ သကြားပါဝင်မှု : 13% ရိတ်သိမ်းရန် မျိုးစေ့ကြဲခြင်း : 75 ရက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် : မူရင်းလက်မှတ် ;CIQ;ISTA ;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် အထွက်နှုန်း မြင့်မားသော အဝါရောင် အသားမဲ အနက်ရောင် အစေ့မပါ ဖရဲသီးစေ့ ဂရမ်...
အနက်ရောင် အသားအရည် အနီရောင် အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် အစေ့မဲ့ ဖရဲသီး အစေ့များကို စိုက်ပျိုးပါ။
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ဖရဲသီးအစေ့ အရောင်- အနက်ရောင်၊ အနီရောင် မူရင်းနေရာ- တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: NOFA4မျိုးစပ်: YES အသီးအသားရေ- ဝက်ခေါက်ဖယောင်းမှုန့် အသားမဲ Col...
အရွယ်အစား ကြီးမားသော အနီရောင် အသား အနက်ရောင် ဝက်ခေါက် စေ့မပါသော ဖရဲစေ့
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- အရွယ်အစားကြီးမားသော အနီရောင်အသား-အနက်ရောင် ကြုတ်ကြုတ် အစေ့မဲ့ ဖရဲသီးစေ့ အရောင်- အနက်ရောင်၊ အနီရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ် နံပါတ်- ဖရဲသီးမျိုးစပ် အမျိုးအစား- YES မျိုးစေ့ အမျိုးအစား- ...
တရုတ် အကြီးစား အစေ့မဲ့ ဖရဲသီး အစေ့ SX No.3
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- အစေ့မဲ့ဖရဲသီး အစေ့အရောင်: အနက်ရောင်၊ အနီရောင် မူရင်းနေရာ: Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SX No.3 မျိုးစပ်: YES အသီးပုံသဏ္ဍာန်: အဝိုင်းအသီး အသားအရောင်: အနက်ရောင် အသားအရောင်: အနီရောင် အသီး အလေးချိန်: 8 -25kg သန့်ရှင်းမှု- 99% သန့်ရှင်းမှု- 98% သကြားပါဝင်မှု- 12.5% ​​ထုပ်ပိုးမှု- 200g/အိတ် ထောက်ခံချက်- CIQ;CO;ISO9001;ISTA ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် China Large-sized Seedless Watermelon Seeds SX No.3 ...
အနက်ရောင်အသားအရည်ကောင်းမွန်ပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိသော အစေ့မဲ့ဖရဲသီးစေ့ SX No.4 RED
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား: ဖရဲသီးစေ့ အရောင်: အနက်ရောင်၊ အနီရောင် မူရင်းနေရာ: Hebei, China အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SX No.4 မျိုးစပ်: YES အသီးပုံသဏ္ဍာန်: ဘဲဥပုံ အသီးအသားရေ: လှပသော သန့်စင်သော ဘော့လုံးအသားအရည် အသားအရောင်: တောက်ပသော အနီရောင် အသီး အလေးချိန်- 8-10kg သကြားပါဝင်မှု- 13-15% အရသာ- အချို;အရသာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CO;ISTA;CIQ ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် အနက်ရောင် အသားရေ ကောင်းမွန်စွာ လိုက်လျောညီထွေရှိသော အစေ့မဲ့ဖရဲသီး အစေ့ SX No.4 1. အသီးပုံသဏ္ဍာန်- o...
RF Oblong ပုံသဏ္ဍာန် အစေ့မဲ့ ဖရဲသီး အစေ့များ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- စေ့မပါသော ဖရဲသီးစေ့ အရောင်- အစိမ်း၊ အနီရောင်၊ အဖြူ မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ် နံပါတ်: RF မျိုးစပ်: YES သန့်ရှင်းမှု: 99% သန့်ရှင်းမှု: 98% အသီးအသားရေ: အစိမ်းရောင် အသားအရည် အစိမ်းရောင် အစင်းကြောင်းများ အသားအရောင်- နီမြန်းကြီးထွားမှု- သန်စွမ်းသောအသီး အလေးချိန်- 7-10kg သကြားပါဝင်မှု- 11.5% ရင့်ကျက်မှု- ပန်းပွင့်ချိန်မှ ရင့်ကျက်မှုအထိ 34 ရက်ခန့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CIQ;CO;ISTA;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်...
TAW တရုတ်လုံးဝိုင်း အစေ့မပါသော အစိမ်းရင့်ရောင် အရေခွံ ဖရဲသီး
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- စေ့မပါသော ဖရဲသီးစေ့ အရောင်- အစိမ်း၊ အနီရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ် နံပါတ်: TAW မျိုးစပ်: YES အသီးအရေ: စိမ်းပြာရောင် သကြားပါဝင်မှု...
ZK1 စိုက်ပျိုးရန်အတွက် တရုတ် Triploid အစေ့မဲ့ ဖရဲသီးမျိုးစေ့
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ဖရဲသီးစေ့ အရောင်- အစိမ်း၊ အနီရောင် မူရင်းနေရာ- ဟီဘေး၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: ZK1 မျိုးစပ်: YES အသီးပုံသဏ္ဍာန်- အဝိုင်းအသီး အလေးချိန်: 9KG အသားအရောင်: ကြက်သွေးရောင် အရသာ- ကြွပ်ဆတ်ချိုမြိန်သော ဖျော်ရည်များ သကြားပါဝင်မှု- 12 ဒီဂရီ ခုခံမှု- Blight နှင့် Anthracnose အစေ့များကို ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသော အမျိုးအစား- အစေ့မဲ့ဖရဲသီးမျိုးစေ့ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CIQ;CO;ISTA;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Chinese T...
ရွှေသစ်ခွ အစေ့မပါ အဝါရောင် ဖရဲသီး အစေ့လေးများ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- စေ့မပါသော ဖရဲသီးစေ့ အရောင်- အစိမ်း၊ အနက်၊ အဝါရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ် နံပါတ်: ရွှေသစ်ခွ မျိုးစပ်: YES အသီးပုံသဏ္ဍာန်: အဝိုင်းအသီး အလေးချိန်: 3kg အသားအရောင်: အဝါရောင် သကြားပါဝင်မှု: 12.5 % သန့်ရှင်းမှု : 99% သန့်ရှင်းမှု : 98% ကုန်ပစ္စည်းအမည် : ရွှေသစ်ခွ အစေ့မပါ အဝါရောင် ဖရဲသီး အစေ့လေးများ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် : CIQ;CO;ISTA;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ရွှေသစ်ခွအသေး...
Room2-2109/2110၊ Yihong အဆောက်အဦး၊ No.298၊ Zhonghua North Street၊ Xinhua ခရိုင်၊ Shijiazhuang
ဖုန်း : 0086 311 68072086
ဖရဲသီးကို အစေ့ကနေ ဘယ်လို စိုက်ပျိုးမလဲ။
Hebei Shuangxing Seeds Co., Ltd. ပထမဆုံး ap...